November 7, 2020 - Achawlaymyar
သုံးရက်အတွင်း ခြေ၊လက်တွေ ဖြူဖွေးလာစေတဲ့ သဘာဝအိမ်တွင်းဆေး…
November 7, 2020 by Achawlaymyar
သုံးရက်အတွင်း ခြေ၊လက်တွေ ဖြူဖွေးလာစေတဲ့ သဘာဝအိမ်တွင်းဆေး… သုံးရက်အတွင်း ခြေလက်တွေ ဖြူဖွေးလာအောင် ဆေးနည်းသစ်တခု ပေးပါရစေ . . . သုံးရက်မဟုတ်ဘဲ တစ်ရက်နဲ့ကို သင့် အသားအရေ ထူးခြား သိသာလာပါလိမ့်မယ်နော် . . .။ အထူးသဖြင့် နေလောင်ထားတဲ့ ခြေ၊လက် အသားအရေအတွက် ဒီနည်းက အသုံး ဝင်လွန်းပါတယ်။ ပျက်ဆီးနေတဲ့ အသားအရေ ပြန်လည် ဖြူဖွေးချင်တယ် ဆိုရင် အဆင့်(၂)ဆင့် ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ် . . .။ ပထမအဆင့်က ဆဲလ်သေတွေ ဖယ်ရှားတဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်။ scrub လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒုတိယအဆင့်က ခြေလက်တွေ ပြန်လည် ဖြူဖွေးလာအောင် ထိန်းသိမ်းရတဲ့ အဆင့် ဖြစ်ပါတယ် . . .။ … Read more
အောင်လကိုချုပ်ကွက်နဲ့အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ 𝙍𝙚𝙞𝙣𝙞𝙚𝙧လို အကပ်အချူပ်ကောင်းတဲ့ကစားသမား တွေကို ဒူးပျံတိုက်ကွက်နဲ့ အလှပဆုံးအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ပွဲများ စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့𝙊𝙣𝙚 𝘾𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣𝙨𝙝𝙞𝙥 ပြိုင်ပွဲကြီးမှာပွဲကြီးပွဲကောင်းအဖြစ် 𝘼𝙪𝙣𝙜 𝙇𝙖 𝙉 𝙎𝙖𝙣𝙜 Vs 𝙍𝙚𝙞𝙣𝙞𝙚𝙧 De 𝙍𝙞𝙙𝙙𝙚𝙧 တိုယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အားလုံးမျော်လင့်ထားသလို အောင်လနိုင်ပွဲတော့ ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး ပထမအချီ မှာပဲ 𝙍𝙚𝙞𝙣𝙞𝙚𝙧 De 𝙍𝙞𝙙𝙙𝙚𝙧 ရဲ့ချူပ်ကွက်နဲ့ အောင်လကတော့အရုံးပေးလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ် ခုချိန်မှာ𝙊𝙣𝙚 𝘾𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣𝙨𝙝𝙞𝙥 ကတော့ အောင်လ Bigdash အပါ ဝင် ဘရားဇီး သားကြီး Leandro တို့ ကို လည်း စိန် ခေါ် ခွင့် ပေးထား ခဲ့ ပါ တယ် ။ ဘယ်သူ နဲ့ ပွဲ က အရင် … Read more
ထောပတျစေ့ ရှိရငျ စမျးကွညျ့နျော…..
ထောပတ်စေ့ ရှိရင် စမ်းကြည့်နော် မျက်နှာမှာရှိတဲ့ ဝက်ခြံအဆီအဖုတွေ ပျောက်စေမယ့်ကိုယ်တိုင်သုံးနေတဲ့ ထောပတ်စေ့ ဆေးနည်းလေး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။မနေ့ က ကိုယ့်အကိုတစ်ယောက်နဲ့ video callပြောရင်း ဒီပို့ စ်လေးရေးဖို့စိတ်ကူးရတယ်ဆိုပါတော့….. ကိုယ့်အကိုအမတွေကို ကိုယ့်လိုလှစေချင်တဲ့စေတနာကတော့အဓိကပေါ့နော်။ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကိုယ့်အကိုအမတွေထဲမှာ မျက်နှာမှာ အဆီဖုလေးတွေ တင်းတိပ် မှဲ့ခြောက် ဝက်ခြံ နဲ့မျက်နှာအရေးအကြောင်းထင်တာတွေ တော်တော်များများတွေ့ရလို့ပါ။ထောပတ်စေ့အကြောင်းလေးမပြောခင် ကိုယ့်အကြောင်းကို အရင်ပြောပါစေ။ ကိုယ်ကတောသူပီပီ နယ်မှာနေတဲ့တလျောက်လုံးသနပ်ခါးပဲလိမ်းပါတယ် ။ရန်ကုန်ရောက်ပြီး၃နှစ်ကျော်ကာလလေးအတွင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် Cosmetics ဝယ်လိမ်းဖူးတာဆိုလို့ Bellaပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှ စုစုပေါင်း၂ကြိမ်ရယ်ပါ။ ဝယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကလဲ ခရီးသွားတဲ့အခါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသယ်ရတာအဆင်ပြေလို့ပါ။ကျန်တဲ့ရုံးချိန်တွေမှာတော့ သနပ်ခါးပဲအများဆုံးလိမ်းဖြစ်ပြီးပွဲတွေရှိတဲ့အခါနဲ့စိတ်ရတဲ့အခါကျရင် ကိုယ့်အမရဲ့ Cosmetics တွေယူလိမ်းပါတယ် ။ သနပ်ခါးပဲလိမ်းလိမ်း မိတ်ကပ်ပဲလိမ်းလိမ်း ညဘက်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ ရေချိုးပြီးတာနဲ့အမြဲလိမ်းဖြစ်တဲ့အရာ ထောပတ်စေ့ရယ်ပါ ။ဝယ်ရတာလဲလွယ်ကူသလို အကုန်အကျလဲနဲတာမို့နေ့တိုင်းလိုလိုလိမ်းဖြစ်ပါတယ် ။ဘယ်လိုလုပ်ပြီးလိမ်းရလဲဆိုတော့ ကိုယ်တို့ထောပတ်သီးစားကြတဲ့အခါအတွင်းသားလေးတွေယူလိုက်ရင် အထဲကအစေ့လေးကျန်ပါမယ် ။ လူအများစုက … Read more
ကိုဒေ၀ပွဲ Live ကြည့်ချင်သူများအတွက် ပွဲစနေပါပီနော်…
ကိုဒေ၀ပွဲ ကြည့်ချင်သူများအတွက် ပွဲစနေပါပီနော်… အောက်ဆုံးမှာ Liveကြည့်ရမဲ့ you tube ​link​တွေ မြန်မာပရိတ်သတ်တွေသီးသန့် ဒေဝပွဲကို ဖုန်းဘေ ၅၀၀၀ကျပ်နဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ လက်မှတ် ဝယ်ယူရမယ့်လင့် ဖြစ်ပါတယ် တခြားနိုင်ငံသားတွေအတွက်တော့ လက်မှတ်ခက မြန်မာငွေ ၃၅၀၀၀ကျပ်ခန့်နဲ့ညီမျှတဲ့ ၂၅ဒေါ်လာ ဖြစ်ပါတယ် ဒေဝပွဲကို Websiteကနေ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုချင်ရင် – ဘာတွေလိုမှာလဲ (၁) မှတ်ပုံတင်ဖို့ gmail အကောင့်တစ်ခု လိုပါမယ် (၂) Orredoo/ Mytel ဖုန်းအော်ပရေတာ တခုခုနဲ့ ဖုန်းဘေ 5000ကျပ် (tax ပါတာကြောင့် လိုလိုပိုပို ၅၅၀၀ကျပ်လောက် ဖြည့်ထားရင် ပိုကောင်းပါတယ်) – ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ (၁) https://leducwashington2.com/ ဒီwebsiteလိပ်စာထဲဝင်ပါ (၂) အောက်နားမှာ #ကြည့်ဖို့ဝယ်မယ်(k5000) ကို နှိပ်ပါ … Read more
ယောက်ျား တစ်ယောက်ကို ချုပ်ကိုင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း(၄) သွယ်…..
ကိုဗဈရောဂါပြောကျကငျးလို့ ဒီကနေ့ အိမျပွနျခှငျ့ရပွီ ဖွဈတဲ့ဦးကြျောသူနဲ့ထှနျးကိုကို
ကိုဗဈရောဂါပြောကျကငျးလို့ ဒီကနေ့ အိမျပွနျခှငျ့ရပွီ ဖွဈတဲ့ဦးကြျောသူနဲ့ထှနျးကိုကို Fighting အသငျ့ !အသငျ့ ! Fighting.အားလုံး မင်ျဂလာပါခငျဗြာ။ကြျောနဲ့ထှနျး အိမျပွနျခှငျ့ ရပါပွီခငျဗြား။ကိုဗဈကူးဆကျမှုကွောငျ့ ရကျပေါငျး (၁၈)ရကျတိတိ ဝဘောဂီဆေးရုံမှာ ကုသမှုခံခဲ့ရပါသညျ။ ကုသပေးခဲ့ကွသော ဆရာဝနျ၊ဆရာဝနျမမြား၊ကနျြးမာရေးဝနျထမျးမြား၊ဝဘောဂီဆေးရုံအုပျကွီးနှငျ့တကှ ပွငျပမှကြှနျတျောတို့အတှကျ အဟာရဒါနပွုကွသော အလှူရှငျအပေါငျးတို့နှငျ့ အားပေးနှဈသိမျ့မတ်ေတာပို့ကွသော ညီ/ညီမငယျ အနုပညာရှငျ မြား၊ပရဟိတသမားမြား၊မိတျဆှသေင်ျဂဟမြား၊ပွညျသူလူထုအပေါငျးအပွငျ နစေ့ဉျယနတေို့ငျ ဆေးရုံတကျသညျမှအစပွု၍ မတ်ေတာဓါတျ ပို့လှတျပေးနကွေသော ကြေးဇူးရှငျဆရာတျောဘုရားအပေါငျးတို့အား ရငျထဲနှလုံးသားထဲမှလှိုကျလှိုကျလှဲလှဲ အထူးကြေးဇူးတငျရှိကာ သာဓု သာဓု သာဓုဟုချေါဆိုလိုကျပါသညျ။ အထူးအားဖွငျ့ ကြှနျတေျာ့အား သှေးရညျကွညျလှူဒါနျးလိုကျသော မမွငျ လိုကျရသညျ့ အသကျသခငျကြေးဇူးရှငျပဋ်ဋာနျးဆကျ (နှဈဦး) အားလညျး အထူး သာဓု သာဓု သာဓုဟု ချေါဆိုလိုကျပါသညျ ကြှနျတေျာ့မှေးနအေ့တှကျ ဆေးရုံသို့ပို့ပေးကွသောအမှတျတရ မှေးနကေိ့တျ မြား၊ပနျးစညျးမြား၊မှေးနမေ့တ်ေတာစကားမြား၊Fighting Group မြားအားလုံးကို … Read more
ချစ်သူတွေ ဆိုရင်တောင် ဒီလို ယောက်ျားမျိုးတွေကို အိမ်ထောင်ပြုဖို့ မစဉ်းစားသင့်….
ချစ်သူတွေ ဆိုရင်တောင် ဒီလိုလူမျိုးတွေကို အိမ်ထောင် ပြုဖို့အတွက် သင် မရွေးချယ်သင့်ပါဘူး။ ၁။ သူ့ဘာသာ မရပ်တည်နိုင်တဲ့သူ အလုပ်မရှိ အကိုင်မရှိ။ အသက် ၃၀ ဝန်းကျင်ဖြစ်နေတာတောင် မိဘအပေါ် မှီခိုမှု မလွတ်ကင်းသေးသူ။ ဒီလိုလူမျိုးဟာ သူ့ဘာသာ မရပ်တည်နိုင်တာ ရှင်းနေပါတယ်။ အဲဒီလိုလူမျိုးကိုသာ ရွေးချယ်မိရင် သင်ကပဲ အစစအရာရာ တာဝန်ယူရပါလိမ့်မယ်။ ၂။ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ စိတ်မဝင်စားသူ သူ အိမ်ထောင်မပြုချင်ဘူးလို့ ပြောရင် ယုံလိုက်ပါ။ လက်ထပ်ဖို့ သူ့ကို ဇွတ်အတင်း မတိုက်တွန်းပါနဲ့။ စိတ်မပါဘဲနဲ့ လုပ်တဲ့အလုပ်က ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေနိုင်သလို သူက အိမ်ထောင်တစ်ခု ထူထောင်ဖို့ သတ္တိမရှိသူဆိုတာ သိသာလှပါတယ်။ ၃။ သင်ကြိုးစားတာတောင် တည်ကြည်လေးနက်မလာသူ ညတိုင်း ကလပ်မှာပဲ အချိန်ကုန်၊ ပျော်ပါးသောက်စားနေသူမျိုးနဲ့ ဘဝတစ်ခုကို … Read more
အကျင့်ဆိုးလေးတွေ ရှိပေမယ့် စိတ်ရင်း ကောင်းတဲ့ အငယ်ဆုံးလေးတွေအကြောင်း….
လမ်းဘေးမှာဈေးရောင်းနေတဲ့ ပန်းသည်က​လေးကို Video ရိုက်တင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်နေကြတဲ့သူတွေကို အောင်သမာဓိဦးအောင်ပြောပြ…..
လမျးဘေးမှာစြေးရောငျးနတေဲ့ ပနျးသညျက​လေးကို Video ရိုကျတငျခဲ့တာနဲ့ပတျသကျပွီး ဝဖေနျနကွေတဲ့သူတှကေို အောငျသမာဓိဦးအောငျပွောပွီ အောငျသမာဓိ ပိုငျရှငျကွီးက လမျးဘေးမှာစြေးရောငျးနတေဲ့ သူ့မွေးအရှယျ ကလေးဆီကို သှားပွီး ဆငျးရဲသားမိဘတှရေဲ့ သား သမီးတှဘေယျလိုအလုပျလုပျရတယျဆိုတာကိုသူ့မွေးမြားကိုပွောပွပွီး စြေးသညျကလေးဆီက ရောငျးသမြှ အကုနျဝယျပီးအားပေးလိုကျတာပဲဖွဈပါတယျ ဒီ Video ဖိုငျနဲ့ပတျသကျပွီး ပရိတျသတျတခြို့ကဝဖေနျနကွေတာပဲဖွဈပါတယျ Video ကိုမကွညျ့ရသေးသူမြားအတှကျအောကျမှာတငျပေးထားပါတယျ ဝဖေနျနကွေသူတှကေိုတော့ ဦးအောငျက အခုလိုပဲပွောထားတာဖွဈပါတယျ အေး​ဆေးပါ ဒီ​နထေိ့ပရိတျသတျကိုမ​စျောကားဘူးပါ ပနျးသညျက​လေးပို​တောငျး​ရောငျး​ကောငျး​နပေါတယျ ​ဝဖေနျ​နသေူမြားအ​ကောငျ့အစဈမြားမဟုတျလြှငျ ​စျောကားလိုရုံသကျသကျဖွဈပါလိမျ့မယျ ​စိနျလိုကျ​ရှလေိုကျကိစ်စ အနာရှိသူမြားစပျပါလိမျ့မယျ ​​ယ​နထေိ့ ​ရေးခဲ့ ​ပွောခဲ့တဲ့ စာနဲ့စကားတလုံးခွငျးစီကိုတာဝနျယူပါတယျ ပနျးသညျက​လေးVideo ဆရာသမားတ​ယောကျကဖကျြလိုကျပါဆိုလို့ဖကျြလိုကျတာပါ 1.7 M ​တောငျလူကွညျ့ထားတားအလှနျနှ​​​မွောပါတယျ ပရိတျသတျကွညျ့ခငျြရငျဖုံးထဲမှာရှိပါတယျလိုအပျရငျပွနျတငျ​ပေးပါမယျ လူမိုကျတဈ​သောငျးကဲ့ရဲ့​ညောငျးလညျး သူ​ကောငျးတ​ယောကျခြီးမှမျး​​ပြောကျပါသတဲ့ ကြုပျ​​ရေးတာ ​​ပွောတာ​တှလေမျးမှား​နရေငျ ကြုပျကိုဆုံးမ​ပေး​နတေဲ့ ဆရာ​တျော လူပညာရှိ​တှရှေိပါတယျ မှား​နရေငျနာယူနာခံဘို့အဆငျ့သငျ့ပါ ​​ဝဖေနျတာ အကွံပွုတာမဟုတျဘဲနဲ့ … Read more